HTAR WAIE THAR
( သိ​ထား​သ​မျှ​သော အကြောင်းအရာ​များ စုစည်း​ရေး​သားဖော်​ပြ​ခြင်း )
Myanmar Language and Fonts
Espon Stylus 1390 Printer အတြက္ Resetter ေလးပါ
7:41 PM Printer Resetter No comments
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ Reset လုပ္ဖို႔ Online ကေနရွာရင္း အဆင္မေျပတာနဲ႔ ၀ယ္သံုးထားတဲ့ Software ေလးပါ။ 100% Espon Stylus 1390 Resetter ေလးပါ။
Smadav Antivitrus 2017 Latest [1.4MB]
7:02 PM Antvirus No comments
ေနာက္ဆံုးထြက္ အစြမ္းထက္လွတဲ့ Smadav Antivirus ေလးပါ။ 1.4MB ရွိၿပီး License Keys မ်ားပါ တစ္ခါတည္းထည့္ေပးထားတဲ့အတြက္ Pro Version ေလးအျဖစ္ အသံုးျပဳရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ USB Stick ေတြကို Lock ခ်ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ Setting မ်ားအတြက္ Security အျပည့္အ၀ျဖင့္ ပိတ္၍ သံုးႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။
Smadav Pro Version Keys
Window OS, Application, Game, နည္းပညာမ်ား
Linux OS နည္းပညာမ်ား
နည္းပညာ ebooks မ်ား
အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​မြတ်​စွာ​ဘုရား ကို ဖူး​ခွင့်​ရ​မည့် ပုဂ္ဂိုလ်​များ
1:25 AM (a) ဗုဒ္ဓစာပေများ No comments
​၁။ ယခု​ကြုံတွေ့​နေ​တဲ့ ဂေါတမ သာသနာ​တွင်း​မှာ ကိုယ်တိုင် ရဟန်း​သာမဏေ သီလ​ရှင်​ဝတ်​ပြီး ပရိယတ်၊ ပ​ဠိ​ပတ်သာ​သ​နာ​ပြု​တဲ့ ပု​ဂ္ဖို​လ်။
​၂။ မိမိ​ရင်​မှ​ဖြစ်​တဲ့​သား၊ သူတစ်ပါး​ရင်​မှ ဖြစ်​တဲ့​သား​တွေ​ကို ရဟန်းခံ​ပေး​ခြင်း၊ ရှင်ပြု​ပေး​ခြင်း​ပြု​တဲ့ ပု​ဂ္ဖို​လ်။
​၃။ မိ​ခင်​ဖ​ခင်​တို့​ကို ဝတ်​ကျေ​တန်း​ကျေ​မဟုတ်​ဘဲ စိတ်ပါ​လက်​ပါ ရိုသေ​စွာ​ပြုစု​လုပ်ကျွေး​တဲ့ ပု​ဂ္ဖို​လ်။
​၄။ သရဏဂုံ​သီလ မ​ပြတ် ဆောက်တည်​သော ပု​ဂ္ဖို​လ်။
၅။ ဘုရား​သာသနာ တည်​စိမ့်​သော​ဌာ စေတီ၊ ပုထိုး၊ စည်း​ခုံ ဥ​မင်​လို​ဏ်​ခေါင်း ဇရပ် စ​သည်​တို့​ကို ပြုပြင်​တဲ့​ပု​ဂ္ဖို​လ်၊ အသစ်​ဆောက်​လုပ်​လှူး​ဒါ​န်း​တဲ့ ပု​ဂ္ဖို​လ်။
​၆။ ​ဗော​ဓိ​ညောင်​ပင် စိုက်ပျိုး​သော ပု​ဂ္ဖို​လ်၊ ညောင်ရေ​သွန်းလောင်း​သော ပု​ဂ္ဖို​လ်။
​၇။ ရေတွင်း ရေကန် ရေအိမ် စ​တု​ဒီ​သာ ကျောင်း​ဇရပ် တံတား ပြုပြင်​သော​ပု​ဂ္ဖို​လ်၊ အရုဏ်ဆွမ်း နေ့​ဆွမ်း လောင်​လှူ​သော ပု​ဂ္ဖို​လ်။
​၈။ ရဟန်း​တို့​အား ပစ္စည်း​လေး​ပါး လှူဒါန်း​ထောက်ပံ့​သော ပု​ဂ္ဖို​လ်။
​၉။ ကမ္မ​ဋ္ဌာ​န်း​ဘာဝနာ ပွား​များ​အားထုတ်​သော ပု​ဂ္ဖို​လ်
အားလုံး ဧကန်​မုချ မြေကြီး လက်ခတ်​မ​လွဲ၊ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားရှင်​ကို ဖူးမြော်​ရ​ပြီး ​နိ​ဗ္ဖာ​န်​ကို​ရ​မယ်။
ကျွန်တော်​တို့​ဟာ တကယ်​လို့ ဗုဒ္ဓ​ဘာသာ​ဝင်​တွေ ဖြစ်​ကြ​မယ်​ဆို​ရင် ဟော​ဒီ​ကမ္ဘာ​မှာ နောင်​ပွ​င်​တော်​မူ​မဲ့ မြတ်​စွာ​ဘုရား​အကြောင်း​ကို သိ​ချင်​ကြ​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ် တချို့​လည်း သိ​ပြီး​ဖြစ်​နေ​ကြ​မှာ​ပါ မ​သိ​ရ​သေး​တဲ့ သူ​တွေ​အတွက် ဒီ​ပို​စ့်​လေး​ကို​တင်​လိုက်​တာ​ပါ ဒီ​မေး​လ်​လေး​ကို ပို့​ပေး​တဲ့ အရှင်​ဝိ​မ​လ​ဝံ​သ​ကို အ​ထူး​ကျေးဇူးတင်​ပါ​သည်​ဘုရား။ နောင်​ပွင့်​တော်​မူ​မည့် အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားရှင် ကို ရှိခိုး​ကန့်​တော့​လိုက်​ပါ​တယ် ဘုရား
ကျွန်တော်​တို့ နေထိုင်​သော​ဟော​ဒီ​ကမ္ဘာ​မှာ​ဘုရား​ငါး ဆူ​ပွင့်​မယ်​လို့ မှတ်သား​ကြားသိ​ဖူး​ပါ​တယ် အခု​ဘုရား​လေး​ဆူး​ပွင့်​ထွန်း​ပြီး​ပါ​ပြီ နောင်​ပွင့်​လ​တ္တံ​သော မြတ်​စွာ​ဘုရား​မှာ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားရှင် ဟု​သိ​ရ​ပါ​တယ်။ ဗုဒ္ဓ​ဘာသာ​တိုင်း​ရဲ့​ရည်​မှန်း​ချက်​ပန်း​တိုင်း​က နိဗ္ဗာန်​ဖြစ်​ပါ​တယ် "အလွန်​ကြည်ညို​စရာ​ကောင်း​သော​ဘုရားရှင်​ရဲ့ တရား​တော်​အားနာ​ကြား​ပြီး ရှေ့​တော်​မှာ​တင်​ကျွတ်​တမ်း​ဝင် နိဗ္ဗာန်​စံ​ရ​မယ်​ဆို​ရင် အကောင်း​ဆုံး​ပေါ့​ဗျာ။"
အဲ​ဒီ​အတွက် ကျွန်တော်​တို​ဘုရားရှင် ​ဟေား​ကြား​ခဲ့​သည့်​အတိုင်း လိုက်​လုပ်​ဖို့ လို​ပါ​တယ် …သုံး​ချက်​ထဲ​ပါ
​၁။ မကောင်းမှု ကို​ရှောင်​ရ​မယ် ။
​၂။ ကောင်းမှု ကို​ဆောင်​ပြီး​အစဉ်​ပြုလုပ်​နေ​ရ​မယ် ။
​၃။ စိတ်​ကို ဖြူစင်​အောင်​ထား​ရ​ပါ​မယ် ။
ဂေါတမ မြတ်​စွာ​ဘုရားရှင်​က ကပ္ပိ​လ​ဝတ်​ပြည် ​နိ​ဂြော​ဓာ​ရုံ​ကျောင်း​မှာ သီတင်းသုံး​နေ​တဲ့​အချိန် အရှင်​သာ​ရိ​ပု​တ္တ​ရာ​၏ လျှောက်ထားချက်​အရ အရ​ဟ​တ္တ​ဖိုလ်​ဈာန်​သ​မာ​ပတ် ဝင်စား​ပြီး အ​ဇိ​တ​ရဟန်း နောင်​အနာဂတ်​ကာလ​မှာ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရား ဖြစ်​တော်​မူ​မည့်​အကြောင်း​ကို ဟောကြား​တော် မူ​ပါ​တယ်။ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားလောင်း​က တစ်​သင်္ချေ​နှင့် ကမ္ဘာ​တစ်​သိန်း ပါရမီ​တွေ​ဖြည့်​ကျင့်​ပြီး တု​သိ​တာ​နတ်ပြည်​မှာ​ရှိ​နေ​မယ်။
အလောင်း​တော်​နတ်​သား​က လူ့​ပြည်​ကို​ဆင်း​ပြီး ပဋိသန္ဓေနေ​ဖို့​ရာ​အတွက် ဘုရားလောင်း​တို့​ရဲ့ ထုံး​တမ်း​အစဉ်​အလာ ဓမ္မတာ​အရ ပဋိသန္ဓေယူ​တော့​မယ်​ဆို​ရင် ကြည့်​ခြင်း​ငါး​ပါး အရ​င်​ကြည့်​ပြီး​မှ ပဋိသန္ဓေယူ​လေ့​ရှိ​ကြ​တယ်။
(၁)ဘုရား​ဖြစ်​မည့်​ခေတ်​အခါ​ကာလ​ကား အနှစ်​တစ်​သိန်း​မှ​စ​ပြီး အောက်​ဖြစ်​သော​ကာလ အနှစ်​တစ်​ရာ​တန်း​မှ​စ​ပြီး အထက်​ဖြစ်​သော​ကာလ (တစ်​သိန်း​နှင့် တစ်​သိန်း​အောက်- ​၁​၀​ဝ​အထက်)
(၄)ဘုရားလောင်း​ဖြစ်​ရာ အမျိုး​ကား မင်း​မျိုး ပုဏ္ဏား​မျိုး
(၅)မယ်တော်​၏​အသက်​အပိုင်းအခြား​ကား ဘုရားလောင်း​မွေး​ပြီး ခုနစ်​ရက်​သာ​နေ​ရ​ခြင်း
ကေ​တု​မ​တီ​ပြည်………..သ​င်္ခ​စကြဝတေး​မင်း​နှင့်​တိုင်ပင်​ကြံစည်​ဘက်​ကိုးကွယ်​ရာ​ဖြစ်​သော အတိတ် အနာဂတ်​ကို​သိမြင်​နိုင်​ပြီး​ပ​စ္စု​ပန်​သံသရာ​အစီးအပွား​ကို ဆုံးမ​တတ်​သော သု​ဗြ​ဟ္မ​ပုဏ္ဏား​ကြီး​၏ ​ဗြ​ဟ္မ​ဏ​ဝ​တီ​ပုဏ္ဏေးမ​ဝမ်း​မှာ ပဋိသန္ဓေနေ​လိမ့်​မည်။
​ဗြ​ဟ္မ​ဏ​ဝ​တီ​ပုဏ္ဏေးမ​ဝမ်း​မှာ​ဆယ်​လ​ပြည့်​တဲ့​အခါ​မှာ ဣ​သိ​ပ​တေ​န​သမင်​တော​မှာ မယ်တော် ​ဗြ​ဟ္မ​ဏ​ဝ​တီ​သည်​ထိုင်​လျက်​လည်း​မဟုတ် အိပ်​လျက်​လည်း​မဟုတ်​ဘဲ ရပ်​လျက်​သာ​လျှင် သစ်ပင်​၏​အကိုင်း​အခက်​ကို​ကိုင်​လျက် မေ​တ္တေ​ယျ​ကို​ဖွား​တော်​မူ​လိမ့်​မည်။ဘုရားလောင်း​နဲ့​အတူ တစ်​ချိန်​တည်း​ဖွား​တော်​မူ​တဲ့​ဖွား​ဘက်​တော် ​၁​၈ ကုဋေ​အားလုံး​အမတ်​တွေ​ချည်း​ဖြစ်​မယ်။ အ​ဇိ​တ​ဟူ​သော​အမည်​ကို​သာ​ပေး​လိမ့်​မယ်။ ဘုရားလောင်း​အ​ဇိ​တ​မင်းသား​ဟာ​ဖွား​လျှင်​ဖွား​ချင်း ခုနစ်​ဖဝါး​လှမ်း​ပြီး ခြေ​တော်​ချ​တိုင်း​ချ​တိုင်း ကြာ​ပွင့်​တွေ​ပေါ်ပေါက်​လိမ့်​မယ်။
ဖွား​လျှင်​ဖွား​ချင်း ခုနစ်​လှမ်း​လှမ်း​ပြီး "ယခု​ဘဝ​ကား ငါ့​အဖို့​နောက်ဆုံး​ဘဝ​တည်း နောက်ထပ်​ဘဝ​မ​ရှိ​တော့​ပြီ အာသဝေါ​ကင်း​သည် ဖြစ်​သော​ကြောင့်​ငြိမ်း​အေး​လ​တ္တံ့" ဟူ​သော​စကား​ကို​အရပ်​လေးမျက်နှာ​ကို ကြည့်​ပြီး​ပြောဆို​လိမ့်​မယ်။
အ​ဇိ​တ​မင်းသား​လောက​စည်းစိမ်​ခံစား​ဖိ​ ု႔​ရာ​နေမင်း​၏​ရောင်ခြည်​ကဲ့သို့ လူ​သား​တွေ​မျက်စိ​ဖြင့် စိန်းစိန်း​မ​ကြည့်​ဝံ့​တဲ့ အရောင်​တ​လက်လက်​ဖြင့် ရတနာ​အရောင် ထွန်းလင်း​ပြောင်​တဲ့​တင့်တယ်​ခံ့​ညား​သော ပြာ​သာ​ဒ်​လေး​ဆောင် ပေါ်ပေါက်​လာ​လိ်​မ့်​မည်။ ပြာ​သာ​ဒ်​လေး​ဆောင်​ကို တစ်​ဆောင်​မှာ ပရိဘောဂ​အသုံးအဆောင် အ​ပြည့်​အစုံ​ပါ​တဲ့​တိုက်ခန်း​က ခုနစ်​ထောင်​စီ တစ်ဖက်​တစ်ဖက်​မှာ ပတ္တမြား​ကျောက်​မျက်​ရွဲ​စီ​သော​နဝရတ်​ကိုး​ပါး​နဲ့ ပြည့်စုံ​သော ပလ္လင်​ခုနစ်​ထောင်​စီ ရတနာ​ခုနစ်​ပါး​နှင့်​ပြည့်စုံ​သော ထီးဖြူ​ခုနစ်​ထောင်​စီ ခုတင်​ညောင်စောင်း​ခုနစ်​ထောင်​စီ ပြာ​သာ​ဒ်​တစ်​ဆောင်​ကို တိုက်ခန်း​က ခုနစ်​ထောင်​စီ​ဆို​တော့ ပြာ​သာ​ဒ်​လေး​ဆောင်​ဆို​ရင် တိုက်ခန်း​ပေါင်း ​၂​၈​၀​၀​၀ ရှိ​မယ်။ ပြာ​သာ​ဒ်​တစ်​ဆောင်​တစ်​ဆောင်​ကို ရွှေ​အိုး​ကြီး​က​တစ်​လုံး​စီ။ ရွှေ​အိုး​တစ်​လုံး​စီ​ရဲ့​အဝ​ကား တစ်​ယူဇနာ​ကျယ်​မယ်။ ရွှေ​အိုး​၏​အမောက်​ကား မြေကြီး​နဲ့​အမျှ​အောက်မြေ​ကြီး​အဆုံ​ း​ထိ သုံး​လို့​မ​ကုန်​ဘူး။ ဒါ​တင်​မက​သေး​ဘူး ရွှေ​အိုး​တစ်​လုံး​စီ​မှာ ပဒေသာ​ပင်​ကြီး​ခြောက်​ပင်​စီ ပေါက်​လိမ့်​မယ်။ ပြာ​သာ​ဒ်​တစ်​ဆောင် တစ်​ဆောင်​မှာ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း​ခုနစ်​ထောင် လော​ဟ​က​သိန္ဓောမြင်း တစ်​ထောင်​ဖြင့် မောင်း​နှင်​ရ​သော​ရထား​ခုနစ်​ရာ မောင်းမ​ပေါင်း​တစ်​သောင်း​ခြောက်​ေ ​ထာ​င်​က ဆို​တီးမှုတ်​ဖြေ​ဖျော်​ဖို့​ရာ ကချေသည်​အမျိုးသမီး​ခုနစ်​ထောင်​တို့​ဖြင့်​ဖျော်ဖြေ​ကြ​လိမ့်​မည်။
အချိန်​တန်​လို့​အရွယ်ရောက်​တဲ့​အခါ စ​န္ဒ​မု​က္ခီ​အမျိုးသမီး​နဲ့​အိမ်ထောင်​ပြု​လိမ့်​မည်။ စ​န္ဒ​မု​က္ခီ​အမျိုးသမီး​က​လည်း သူမ​တူ နတ်​သမီး​တ​မျှ​အလွန်​လှပ​ပြီး သူ့​ရဲ့​ခန္ဓာ​ကိုယ်​အနံ့​ကား စန္ဒကူး​သရက္ခန်​အနံ့​လို​မွှေးကြိုင်​နေ​မယ်။ ခန္ဓာ​ကိုယ်​အသား​က​လည်း ဝါဂွမ်း​ကဲ့သို့ နူးညံ့​မယ်။ ခန္ဓာ​ကိုယ်​အရောင်​က ဆ​ယ့်​နှစ်​တောင်​အတွင်း မီး​မ​ထွန်း​ဘဲ အရောင်​တဝ​င်း​ဝင်း​ထိန်​နေ​မယ်။ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားရှင်​ဟာ​ဘယ်လောက်​ဘုန်းကြီး​လိုက်​မ​လဲဆို​တာ ရှင်ဘုရင်​မဟုတ်​ဘဲ​နဲ့ အ​ဇိ​တ​မင်းသား​ဘဝ​လောက်​ရှိ​တာ​တောင်​မှ​သ​င်္ခ​စကြဝတေး​မင်း​နှင့်​တ​ကွ မြို့​ပေါင်း​ရှစ်​သောင်း​လေး​ထောင်​က ရှင်ဘုရင်​တွေ​နတ်​သား​တွေ​က ဝေ​ယျ​ဝ​စ္စ​လုပ်​ပေး​ချင်​လို့​ပြုလုပ်​ခွင့်​ပေး​ဖို့​လာ​ပြီး​တောင်းပန်​ကြ​တယ်​တဲ့။ အ​ဇိ​တ​မင်းသား​က အကျွန်ုပ်​မှာ ဖွား​ဘက်​တော် ​၁​၈ ကုဋေ​အမတ်​ကြီး​နှင့်​တ​ကွ ဆင်​မြင်း​ရဲမက်​ဗိုလ်​ပါ​တွေ ရှိ​ပါ​တယ်။ အလို​မ​ရှိ​တော့​ပါ​ဟု ပြော​လွှတ်​လိမ့်​မယ်။
အ​ဇိ​တ​မင်းသား​ဟာ ပြသာဒ်​လေး​ဆောင်​မှာ လောကီ​စည်းစိမ်​ခံစား​နေ​စဉ်​မှာ အနှစ်​တစ်​သောင်း​ပြည့်​တဲ့​အခါ​ကျ​ရင် ဗြဟ္မာ​ဝံ​သ ဆို​တဲ့ သားယောက်ျား​လေး​မွေး​ဖွား​လိမ့်​မယ် ။
ဗြဟ္မာ​ဝံ​သ သားယောက်ျား​လေး​မွေး​ဖွား​ပြီး​တဲ့​အခါ ဘုရားရှင်​တို့​ရဲ့ ထုံး​တမ်း​စဉ်​လာ ဓမ္မတာ​အရ ဥယျာဉ်​က​ထွက်​စဉ်​မှာ သူအို သူနာ သူ​သေ ရဟန်း နိမိတ်ကြီးလေးပါး​တွေ့​မြင်​ရ​ရင် သံဝေဂ​တရား​တွေ​ရ​လာ​ပြီး​တော့ တောထွက်​မည့်​အကြံ​ဖြစ်​ပေါ်လာ​လိမ့်​မည်။ ဒိ​ဗျာ​ဝ​ဒါန မေ​တ္တေ​ယျ​ဗျာ​ကရဏ​ဝ​ဒါန (၃​၆-၃​၇) မှာ​ပြ​ဆို​ထား​တာ​ကတော့ သ​င်္ခ​မင်း​၏ ယဇ်​တိုင်​အပိုင်းပိုင်း​ပြတ်​သည်​ကို မြင်​ရ​ပြီး သံဝေဂ​ဖြစ်​ပြီး​တောထွက်​လိမ့်​မည်​လို့​ပြ​ဆို​ထား​တာ​ရှိ​သေး​တယ်။ ဘယ်​လို​ပုံ​နည်း​နဲ့​ဖြစ်​ဖြစ် တော​ကတော့​ထွက်​မှာ​ပါ​ပဲ။ အ​ဇိ​တ​မင်းသား တောထွက်​မယ့်​အကြံ​စိတ်​ကို သ​င်္ခ​စကြဝတေး​မင်း​က သိ​တဲ့​အခါ အ​ဇိ​တ​မင်းသား​ပျော်​အောင်ဆို​ပြီး​တော့ ရှစ်​သောင်း​လေး​ထောင်​သော ကချေသည်​တွေ​မြို့သူ မြို့​သား နိဂုံး​ဇနပုဒ်​သူ မင်းသား​မင်း​မြေး သူဌေး သူကြွယ်​စ​သော လူအ​ပေါင်း​တို့​က ပန်းနံ့သာ​စွဲ​လျက် အ​ဇိ​တ​မင်းသား​ကို ခြံရံ​ပြီး နေ​ကြ​လိမ့်​မယ်။ နတ်​ဗြဟ္မာ​တွေ​က​လည်း နတ်​တို့​ရဲ့ ထီး တံခွန် ပန်းနံ့သာ ရွှေ​ပေါက်​ပေါက် ငွေ​ပေါက်​ပေါက် စ​သည်​တို့​ဖြင့် ဘုရားလောင်း​ပြာ​သာ​ဒ် မိုး​ကြီး​ရွာ​သကဲ့သို့ အ​ပြည့်​အလျှံ​ခြံရံ​ခစား​နေ​ကြ​လိမ့်​မယ်။ လူ့​ဘဝ ကာမဂုဏ်​ထဲ​မှာ​ပျော်​အောင်​ဖြေ​ဖျော်​နေ​ကြ​တာ။
အ​ဇိ​တ​မင်းသား တောထွက်​မယ်​ဆို​တဲ့ စိတ်​အကြံ​ကို သ​င်္ခ​စကြဝတေး​မင်း​နှင့်​တ​ကွ တိုင်း​သူ​ပြည်​သား လူ​တွေ​အားလုံး​သိ​သွား​ကြ​တဲ့​အခါ​မှာ ဘယ်​နေ့ ဘယ်​ရက် ဘယ်​အချိန်​မှာ အ​ဇိ​တ​မင်း တောထွက်​မယ်​ဆို​တဲ့ သ​တင်း​အ​သံ​ကို အားလုံး​သိ​သွား​ကြ​တော့ နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသား မြို့သူ​မြို့​သား​တွေ တော​ရွာ​ဇနပုဒ်​က လူ​တွေ မင်းသား မင်း​မြေး သူဌေး သူကြွယ်​အစ​ရှိ​တဲ့ လူ​ပေါင်း​များ​စွာ​နှင့်​တ​ကွ စ​န္ဒ​မု​က္ခီ သား​တော် ဗြဟ္မာ​ဝံ​သ အလုပ်​အ​ကျွေး​ကချေသည်​တွေ​ရော အ​ဇိ​မင်း​ရဲ့ ပြာ​သာ​ဒ်​ထဲ​မှာ တောထွက်​ရင်​လိုက်​ဖို့​ရာ​အတွက်​ပြည့်​လျှံ​ပြီး​တော့​နေ​မယ်။ တောထွက်​မည့် အချိန်​လည်း​ရောက်​ရော လူ​ပေါင်း​များ​စွာ​ပြည့်​နေ​တဲ့ ပြာ​သာ​ဒ်​ကြီး​ဟာ ဘုရားလောင်း​တန်ခိုး​တော်​ကြာ​င့်​လည်းကောင်း စကြဝတေး​မင်း​အာဏာ​ကြောင့်​လည်းကောင်း နတ်​ဗြဟ္မာ​တို့ တန်ခိုး​တော်​ကြောင့်​လည်းကောင်း ဟ​သာ​ၤ​မင်း​ပျံ​သကဲ့သို့ ကောင်းကင်​ယံ​သို့​ပျံ​တက်​ပြီး ကံ့ကော်​ပင်​ရှိ​ရာ​အရပ်​သို့ ကောင်းကင်​ယံ​ခရီး​ဖြင့် တောထွက်​သွား​ကြ​လိမ့်​မယ်။ နတ်​ဗြဟ္မာ​များ ပို့ဆောင်​ခြင်း ကောင်းကင်​ယံ ဟ​သာ​ၤ​ပျံ ပြာ​သာ​ဒ်​ကြီး​ကို ဗြဟ္မာ​မင်း​က သုံး​ယူဇနာ ရှိ​သော​ထီး​ကို​ကိုင်​ပြီး လိုက်​မယ်။ သိကြားမင်း​က အတောင်​ခြောက်​ဆယ်​ရှိ​သော လက်ယာ​ရစ် ခရုသင်း​ကို​ကိုင်​လျက် သာဓု သုံး​ကြိမ်​ခေါ်​ပြီး​လိုက်​မယ်။ သုတ​ဝံ​နတ်​သား​က သားမြီးယပ်​ကို​ကိုင်​ပြီး​လိုက်​မယ်။ တု​သိ​တာ​နတ်​သား​က ပတ္တမြား​ယပ်​ကို​ကိုင်​ပြီး​လိုက်​မယ်။ ပ​ဥ္စ​င်္သိ​ခ​နတ်​သား​က စောင်း​ကို​ကိုင်​မယ်။ လောက​ပါ​လ​နတ်​သား​လေး​ယောက်​က သန်လျက်​ကို​ကိုင်​မယ်။ နှစ်​သိန်း​ရှစ်​သောင်း​ရှိ​တဲ့ ဘီလူး​စစ်သည်​တွေ​က လက်နက်​ကိုယ်စီ​ကိုင်​မယ်။ နတ်​သမီး​တွေ​က ရတနာ​ပု​ဋော​င်း​ကို​ကိုင်​မယ်။ အသူရာ​နတ်​တို့​က သီချင်းဆို​ပြီး​တော့ နတ်​တို့​၏ တံခွန်​ကို​ကိုင်​မယ်။ နတ်​မင်း​တို့​က ပတ္တမြား​ရှိ​သော ဆီမီး​ကို​ကိုင်​မယ်။ ဂဠုန်​တို့​က စောင်းတီး​လိုက်​မယ်။ ဂန္ဓ​ဗ္ဗ​နတ်​တို့​က စောင်းတီး​ပြီး​လိုက်​မယ်။ ဟ​သာ​ၤ​ပျံ​ကောင်းကင်​ပြာ​သာ​ဒ်​ထဲ​မှာ တောထွက်​လို့ လိုက်​ကြ​မည့် ပရိသတ်​တွေ​က ရှစ်​သောင်း​လေး​ထောင်​တဲ့။ ကောင်းကင်​ယံ​ပြာ​သာ​ဒ်​ပျံ​နဲ့ ဆွေ​စုံ​မျိုး​စုံ သား​နဲ့ မယား​နဲ့ ရှစ်​သောင်း​လေး​ထောင်​ပရိသတ်​နဲ့ အခြံအရံ​နဲ့ ကောင်းကင်​ခရီး​ဖြင့် ကံ့ကော်​ပင်​ရှိ​ရာ​သို့ တောထွက်​မှာ။ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားရှင်​ဟာ ကံ့ကော်​ပင်​အောက်​မှာ​ပွင့်​မှာ​ပါ။ ကံ့ကော်​ပင်​ဆီ​ရောက်​တဲ့​အခါ​မှာ အ​ဇိ​တ​မင်းသား​က ကံ့ကော်​ပင်​အောက်​မှာ ဒု​က္က​ခ​ရ​စ​ရိ​ယာ​ကို ကျင့်​တော်​မူ​ပါ​မယ်။ အ​ဇိ​တ​မင်းသား​ဟာ ဒု​က္က​ခ​ရ​စ​ရိ​ယာ​ကို ခြောက်​ရက်​ကျင့်​တော်​မူ​ရုံ​မျှ​နဲ့ ဘုရား​စင်စစ်​ဖြစ်​လိမ့်​မည်။ စ​န္ဒ​မု​က္ခီ​မိဖုရား​က အဲ​ဒီ​နေရာ​မှာ​ပဲ နတ်ဩဇာ​နဲ့​ပြည့်စုံ​တဲ့ နွားနို့​ဆွမ်း​လှု​လိမ့်​မယ်။
ညနေချမ်း​အချိန်​ရောက်​သည့်​အခါ ကံ့ကော်​ပင်​နဲ့ မ​နီး​မ​ဝေး ရတနာ​ခုနစ်​ပါး​နဲ့​ပြည့်စုံ​တဲ့ အမြင့် ​၆​၄​တောင်​ရှိ​တဲ့ ရွှေ​ပလ္လင်​ပေါ်ပေါက်​လာ​လိမ့်​မယ်။ ထို​ရွှေ​ပလ္လင်​အထက်​ဝယ် ထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေ​ထိုင်​နေ​တော်​မူ​လျက် အရှေ့​လောက​ဓာတ်​ကို​ကြည့်​ပြီး နတ်​ပရိသတ်​နဲ့ လူ​ပရိသတ်​တွေ​ခြံရံ​လျက် မာရ်နတ်​ရဲ့​ရန်​ကို​အောင်မြင်​လိမ့်​မယ်။ ညဉ့်​ဦး​ယံ​မှာ ပု​ဗ္ဗေ​နိ​ဝါ​သ​နု​ဿ​တိ​ဥာ​ဏ်​ကို​ရ​မယ်။ သန်းခေါင်ယံ​အချိန်​မှာ ဒိ​ဗ္ဗ​စက္ခု​ဥာ​ဏ်​ကို​ရ​မယ်။ မိုးသောက်ယံ​အချိန် အာ​သ​ဝ​က္ခ​ယ​ဥာ​ဏ်​တွေ​ရ​ပြီး​တော့ နေဝန်း​ကြီး​ပေါ်ပေါက်​လာ​တဲ့​အချိန်​ကျ​တော့ သစ္စာလေးပါး​ကို​သိ​ပြီး သဗ္ဗညုတ​ဥာ​ဏ်​ကို​ရ​မယ်။
ဘုရားပွင့်​တဲ့​ကံ့ကော်​ပင်​ရဲ့ လုံးပတ်​က အဲ​ဒီ​ခေတ်​အခါ​မှာ လူ​တွေ​ရဲ့ အတောင်​နဲ့ အတောင်​ခုနစ်​ဆယ်​ရှိ​မယ်။ အကိုင်း​အခက် ကိုး​ကိုင်း ခက်မ​ကိုး​ဖြာ​လို့​ခေါ်​တယ်။ ကံ့ကော်​ပင်​ရဲ့ အနံ့​တွေ​က လေအောက်​ကို​ဆယ်ယူ​ဇ​နာ လေ​အထက်​ကို ဆယ်ယူ​ဇ​နာ​မွှေး​မယ်။ ကံ့ကော်​ပွင့်​တွေ​က နွား​လှည်း​ဘီး​လောက်​ကြီး​မယ်။ ဘုရား​ဖြစ်​တဲ့​နေ့​က​စ​ပြီး ပွင့်​ကြ​တဲ့ ကံ့ကော်​ပွင့်​တွေ​ဟာ ဘုရား​ပရိနိဗ္ဗာန်စံ​တဲ့​နေ့​ကျ​မှ ကြွေ​ကြ​တော့​မှာ။ အဲ​ဒီ​ကံ့ကော်​ပင်​ကို ဘယ်​ငှက်​မှ မ​နား​ဝံ့​ကြ​ဘူး။ ဖြတ်​ကျော်​မ​ပျံ့​ဝံ့​ကြ​ဘူး။ ကံ့ကော်​ပင်း​နား​ရောက်​တဲ့​ငှက်​တို င်း သတ္တဝါ​တိုင်း ကံ့ကော်​ပင်​ကို လက်ယာ​ရစ်​သုံး​ပတ်​ပတ်​ပြီး​မှ သွား​ကြ​လိမ့်​မယ်။ ဗြဟ္မာ​မင်း​က တရားဟော​ရန် တောင်းပန်​ခြင်း အဲ​ဒီ​ကံ့ကော်​ပင်​ရဲ့ အနီး​အနား​မှာ​ပဲ သီတင်းသုံး​နေ​တဲ့​အချိန် လေး​ဆ​ယ့်​ကိုး​ရက်​ကျော်​လွန်​တဲ့​အခါ ပွင့်​တော်​မူ​သွား​ကြ​တဲ့ ဘုရားရှင်​တိုင်း​ရဲ့ ထုံး​တမ်း​အစဉ်​အလာ​အရ ဗြဟ္မာ​မင်းကြီး​ရဲ့​လောက​ဂရု​ကို ခံယူ​မယ်။ ဗြဟ္မာ​မင်း​က​တောင်းပန်​မှ တရားဟော​ရ​တာ​က ပွင့်​တော်​မူ​သွား​ကြ​တဲ့ ဘုရားရှင်​တိုင်း​ရဲ့ ဓမ္မတာ​ဖြစ်​လို့ ဟော​ရ​တာ။ ဘုရား​မ​ပွင့်​မီ ​ဗာ​ဟိ​ရကာ​လ​မှ လူ​ဝတ်ကြောင်​များ ရသေ့ ပရိ​ဗို​ဇ် ရဟန်း ပုဏ္ဏား​တို့​တွေ​ဟာ ဗြဟ္မာ​တွေ​ကို​သာ အလေး​ဂရုပြု ကိုးကွယ်​နေ​ကြ​တာ။ တ​လောက​လုံး​က အလေး​အမြတ်​ပြု​သော ဗြဟ္မာ​ကြီး​က မြတ်​စွာ​ဘုရား​အား အလေးပြု ညွှတ်​တွား​ကိုင်း​ရှို​င်း​လာ​လျှင် တစ်​လောက​လုံး​ပင် မြတ်​စွာ​ဘုရား​ကို အလေးပြု​ညွှတ်​တွား​ကိုင်း​ရှို​င်း​လာ​လိမ့်​မယ်။ အဲ​ဒါ​ကို လောက​ဂရု ယူ​လိုက်​တာ​လို့​ခေါ်​တယ်။
ဗြဟ္မာ​မင်း​ထံ​မှ တရားဟော​ရန်​ဝန်ခံ​ပြီး​ပြီ​ဆို​လျှင်​ပဲ ဣ​သိ​ပ​တန​ဥယျာဉ်​တော​သို့ ဓမ္မ​စကြာ​တရားဟော​ဖို့​ရန်​ကြွ​လိမ့်​မယ်။ ဘုရားရှင်​ခြေ​တော်​အစုံ​ကို ခံ​အံ့​သော​ငှာ မြေကြီး​ကို​ခွင်း​ပြီး အတောင်​သုံး​ဆယ်​ရှိ​တဲ့ ကြာ​ပွင့်​ကြီး ​၂​၄ တောင်​ရှိ​တဲ့ ကြာ​ပွင့်​ငယ်​တွေ​က ဘုရားရှင်​ခြေ​ချ​တိုင်း ခြေ​ချ​တိုင်း ပွင့်​ပေး​လိမ့်​မယ်။ လူ​ပရိသတ် ရှစ်​ယူဇနာ နတ်​ပရိသတ် စကြာ​ဝ​ဠာ​တိုက်​အ​ပြည့် ဗြဟ္မာ​ပြည်​အထက်​ဆုံး အက​နိ​ဋ္ဌ​ဘုံ​တိုင်အောင် ပရိသတ်​တွေ​ကို ထန်းသီး​လုံး​လောက်​ကြီး​သော ရောင်ခြည်​တော် ခြောက်​ပါး​လွှတ်​ပြီး ဓမ္မ​စကြာ​တရားဟော​တဲ့​အခါ​မှာ လူပု​ဂ္ဂို​လ် ကုဋေ​တစ်​သိန်း နတ်​ဗြဟ္မာ​တွေ​က ကုဋေ​တစ်​သိန်း ကျွတ်​တမ်း​ဝင်​ကြ​လိမ့်​မယ်။
ဘုရားရှင်​၏​တန်ခိုး​တော်​ကြောင့် ရွှေပန်း​ဆိုင်း ငွေပန်း​ဆိုင်း ပုလဲ​ပန်းဆိုင်း သန္တာ​ပန်းဆိုင်း​တို့​ဖြင့် တန်ဆာ​ဆင်​လျက် ရတနာ​ခုနစ်​ပါး​နှင့် ပြည့်စုံ​ပြီး ဆ​ယ့်​နှစ်​ယူဇနာ​ကျယ်ဝန်း​တဲ့ ဗိ​မာန်​မျက်နှာ​ကျက်​သည် ဓမ္မ​စကြာ​တရား​ဦး​ဟော​သည့်​နေ့​မှ​စ​ပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်​ဝင်​စံ​သည့်​တိုင်အောင် နေ့​ည​အ​မြဲ​ပင်​လိုက်​ပါ​ပြီး မျက်နှာ​ကျက်​အဖြစ် မိုးကာ​ပြီး​နေ​မယ်။ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရား နေ​သန့်စင်​သော​အခါ နေ​ဖို့​ရာ​အတွက် မြေကြီး​တို့​ကို​ခွဲ​ပြီး ရတနာသုံးပါး​နှင့်​ပြည့်စုံ​သော ​၁​၂ ယူဇနာ​ကျယ်ဝန်း​တဲ့ ရွှေမ​ဏ္ဍ​ပ်​ကြီး​ပေါ်ပေါက်​လိမ့်​မယ်။ ဘုရားရှင်​တန်ခိုး​တော်​ကြောင့် မိ​တာ​န်​ပန်းဆိုင်း တု​ရင်​တိုင် ထီး တံခွန် ဆီမီး တန်ဆောင်း ရတနာ​မဏ္ဍပ်​ကြီး​ဟာ ဘုရားရှင်​တရားဟော​ရာ ဌာန​တိုင်း​မှာ အိမ်​မှာ​ဟော​မယ်​ဆို​ရင် အိမ်​ပေါက်​ဝ ကျောင်း​မှာ​ဟော​မယ်​ဆို​ရင် ကျောင်း​ပေါက်​ဝ မြို့​မှာ​ဟော​မယ်​ဆို​ရင် မြို့​မှာ တော​မှာ​ဟော​မယ်​ဆို​ရင် တော​မှာ စ​တဲ့ ဟော​တဲ့​နေရာ​တိုင်း​မှာ ကောင်းကင်​ယံ​က​နေ​ပြီး အ​မြဲ​တမ်း ပရိနိဗ္ဗာန်စံ​အထိ ​လ်ို​က်​ပါ​နေ​မှာ။
အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရား တရားဟော​တဲ့​အခါ ဘယ်​မြို့ ဘယ်​ဒေသ ဘယ်​အရပ် ဘယ်​ရွာ​ဒေသ ဇနပုဒ် အိမ်​က​ပဲ​ဟောဟော စကြဝဠာတိုက်​တစ်​သောင်း​လုံး ဘုရားရှင်​ရဲ့ တရားဟော​အ​သံ​ကို​ကြား​နေ​ရ​မယ်။ ဘုရားရှင်​ရဲ့ ပုံ​သဏ္ဌာန်​ကို​လည်း​မြင်​နေ​ရ​မယ်။ ရုပ်​လည်း​မြင်​ရ​မယ် အ​သံ​လည်း​ကြား​ရ​မယ်။ မ​မြင်​ချင်​လို့ မျက်စိ​မှိတ်​ထား​လည်း မ​ရ​ဘူး။ မ​ကြား​ချင်​လို့​နား​ပိတ်​ထား​လည်း​မ​ရ​ဘူး။ ဘုရားရှင်​ရဲ့​တန်ခိုး​တော်​ကြောင့် ​၃​၁ ဘုံ​အကာအရံ​မ​ရှိ ဖီလာ​ထုတ်ချင်း​ပေါက်​မြင်​ကြ​ရ​မှာ။ အပေါ်​ကြည့်​ရင် နတ်​သား နတ်​သမီး ဗြဟ္မာ​တွေ​မြင်​ရ​မယ်။ အောက်​ငုံ့​ကြည့်​ရင် ငရဲ​ပြည်​မှာ ခံစား​နေ​ရ​တဲ့ ငရဲ​ဒုက္ခ​မျိုး​စုံ​ကို​မြင်​ရ​တော့ ငရဲ​ရောက်​အောင် အကုသိုလ်​တွေ​ပြု​ရဲ​ဖို့​မ​ရှိ​တော့​ဘူး။ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားရှင်​ရဲ့​တန်ခိုး​တော်​ကြောင့် ယောက်ျား​ဆို​ရင် နတ်​သား​လို မိန်းမ​ဆို​ရင် နတ်​သမီး​လို ချောမော​လှပ​တွေ​ချည်း​ဖြစ်​ရာ ရုပ်​မ​ချော အင်္ဂါ​မ​စုံ​တစ်​ယောက်​မှ​မ​ရှိ။ အ​ကုန်း​အကွ အက​န်း အ​နူ​အ​ဝဲ​ရောဂါသည်​တွေ လုံး​ဝ​မ​ရှိ။ အသက်​ငါးရာ​ပြည့်​တဲ့​အရွယ်ရောက်​ရင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး​တွေ အိမ်ထောင်​ပြု​ကြ​လိမ့်​မယ်။ ဇနီးမောင်နှံ​နှစ်​ဦး ခိုက်ရန်​ဒေါသ​မ​ရှိ ပြဿနာ​မ​ရှိ ကွဲကွာ​သွား​ခြင်း​လည်း​မ​ရှိ။ အ​မြဲ​အဆင်​ပြေ​မယ်။ ရာ​သက်​ပန်​ပေါင်းသင်း​ရ​မယ်။ အမျိုးသမီး​တိုင်း​မှာ ပတ္တမြား​နား​တောင်း လက်​စွပ် လက်ကောက် ခြေ​ကျင်း​စ​သည်​တို့​ဟာ ရွှေ​အိုး​ကြီး​တွေ​ထဲ​က ကြိုက်​နှစ်သက်​ရာ ယူ​ဝတ်​ကြ​မှာ။ ရွှေမ​ဝတ်​နိုင်​တဲ့​သူမ​ရှိ​ဘူး​တဲ့။ စားစရာ​ပဒေသာ​ပင်​တွေ​မှာ ယူစား​ချင်​တဲ့​အချိန်​ယူစား​လို့​ရ​တယ်။ ကျန်းမာ​ရေး​အနေ​နဲ့​ကြည့်​မယ်​ဆို​ရင်​လည်း ဘာ​ရောဂါ​မှ​ကို​မ​ရှိ​ဘူး။ နေ့​ည​ခွဲ​မ​ရ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားရှင်​ရဲ့ တန်ခိုး​တော်​ကြောင့် ကမ္ဘာ​လော​ကြီး​ဟာ နေ့​အခါ ည​အခါ​ရယ်​လို့​မ​ရှိ နေ့​ရော​ည​ပါ အ​မြဲ​တမ်း​လင်း​ထိန်​ပြီး​တော့ မနက်​ပွင့်​တဲ့​ပန်း ည​ပွင့်​တဲ့​ပန်း မနက်​ပန်း ည​ပန်း ကြက်တွန်​သံတွေ​ကို ကြည့်​ရှု​နားထောင်​ပြီး နေ့​ည​ခွဲ​ယူ​ရ​လိမ့်​မယ်။ ပရိနိဗ္ဗာန်စံ​မည့်​အရွယ် မြတ်​စွာ​ဘုရားရှင်​ဟာ ဘုရား​ဖြစ်​တော်​မူ​ပြီး​တဲ့​အချိန်​က​စ​ပြီး ကုဋေ​ခုနစ်​ရာ​သော ပရိသတ်​တို့​ကို ချေ​ချွတ်​တော်​မူ​ပြီး​လျှင် အနှစ်​ရှစ်​သောင်း​ပြည့်​တဲ့​အချိန်​မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံ​ဝင်​လိမ့်​မယ်။ ဒါ​ပေ​မယ့် သာသနာ​တော်​က အနှစ်​နှစ်​သိန်း​ခြောက်​သောင်း ပြည့်​တဲ့​အခါ ဘ​ဒ္ဒ​ကမ္ဘာ​ကြီး​သည် အချိန်​တန်​လျှင် ပျက်​ပြီး ကမ္ဘာ​တစ်​သိန်း​ကာလ​လုံး ဘုရား​မ​ပွင့်​တော့​ဘူး​တဲ့။ ဘုရား​မ​ပွင့်​တဲ့ ကမ္ဘာ​တစ်​သိန်း​ကျော်​လွန်​သော​အခါ မ​ဏ္ဍ​ကမ္ဘာ​ဖြစ်​ပြီး​တော့ ဥ​တ္တ​ရာ​မမ​င်း​သည် ရာ​မ​သ​မ္ဗု​ဒ္ဓ​ဘုရား​ဖြစ်​လိမ့်​မယ်။ ပ​သေ​န​ဒီ​ကောသ​လမင်း​က ဓမ္မရာဇာ​ဘုရား​ဖြစ်​လိမ့်​မယ်။ အဲ​ဒီ မ​ဏ္ဍ​ကမ္ဘာ​မှာ​ဘုရား​နှစ်​ဆူ​ပွင့်​ပြီး ပျက်စီး​သွား​တဲ့​အခါ သာ​ရ​ကမ္ဘာ​ဖြစ်​ပေါ်​ပြီး အဘိ​ဘူ​ဘုရား​တစ်​ဆူ​သာ​ပွင့်​လိမ့်​မယ်။ သာ​ရ​ကမ္ဘာ​ပျက်​ပြီး ကမ္ဘာ​တစ်​သိန်း​ဘုရား​မ​ပွင့်​ဘဲ​နေ​ပြီး​တော့ ကမ္ဘာ​တစ်​သိန်း​ကျော်​လွန်​သော​အခါ ဖြစ်​ပေါ်လာ​မယ့် ကမ္ဘာ​များ​မှာ ဒီဃ​သော​နိ​အသူရိန်​နတ်​သား စ​န္ဒ​နီ​ပုဏ္ဏား၊ သု​ဘ​လုလင် တော​ဒေ​ယျ​ပုဏ္ဏား ၊ နာ​ဠာ​ဂီ​ရိ​ဆင်​မင်း ပ​လ​လေ​ယ​ဆင်​မင်း​တို့ အစဉ်​အတိုင်း ဘုရား​ဖြစ်​လိမ့်​မယ်။ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​ဘုရားဖူး​မြော်​ရန် ပြုလုပ်​ရ​မည့်​ကုသိုလ် ယခု​ကြုံတွေ့​နေ​ရ​တဲ့ ဂေါတမ​မြတ်​စွာ​ဘုရား သာသနာ​ကာလ​အတွင်း​မှာ ကိုယ်တိုင် ရဟန်း​သာမဏေ သီလ​ရှင်​ဝတ်​ပြီး ပရိယတ် ပဋိပတ် သာသနာပြု​နေ​တဲ့​ပုဂ္ဂိုလ် မိမိ​ရင်​မှ​ဖြစ်​တဲ့​သား သူတစ်ပါး​ရင်​မှ​ဖြစ်​တဲ့​သား​တွေ​ကို ရဟန်းခံ​ပေး​ခြင်း ရှင်ပြု​ပေး​ခြင်း​ပြု​တဲ့​ပုဂ္ဂိုလ် မိ​ခင်​ဖ​ခင်​ကျေးဇူးရှင်​တွေ​ကို ဝတ်​ကျေ​တမ်း​ကျေ​မဟုတ်​ဘဲ စိတ်ပါ​လက်​ပါ​ပြုစု​လုပ်ကျွေး​သော​ပုဂ္ဂိုလ် သရဏဂုံ​သီလ​မ​ပြတ်​ဆောက်တည်​သော​ပုဂ္ဂိုလ် ဘုရား​သာသနာတည်​စိမ့်​သော​ငှာ စေတီပုထိုး စည်း​ခုံ ဥ​မင်​လို​ဏ်​ခေါင်း ဇရပ်​စ​သည်​တို့​ကို ပြုပြင်​တဲ့​ပုဂ္ဂိုလ် အသစ်​ဆောက်​လုပ်​လှု​ဒါ​န်း​တဲ့​ပုဂ္ဂိုလ် ​ဗော​ဓိ​ညောင်​ပင်​စိုက်ပျိုး​သော​ပုဂ္ဂိုလ် ညောင်ရေ​သွန်းလောင်း​သော​ပုဂ္ဂိုလ် ရေတွင်း ရေအိုင် ရေကန် စတုဒိသာ​ကျောင်း​ဇရပ် တံတား​ျ႔​ပု​ပြင်​သော​ပု​ ၢိဳ​လ် အရုဏ်ဆွမ်း နေ့​ဆွမ်း​မ​ပြတ်​လောင်း​လှု​သော​ပုဂ္ဂိုလ် ရဟန်း​တို့​အား​ပစ္စည်း​လေး​ပါး​တို့​ဖြင့်​ထောက်ပံ့​လှု​ဒါ​န်း​သော​ပုဂ္ဂိုလ် ကမ္မဌာန်း​ဘာဝနာ​ပွား​များ​အားထုတ်​သော​ပုဂ္ဂိုလ်…. အဲ​ဒီ ပုဂ္ဂိုလ်​တွေ​အားလုံး ဧကန်​မုချ မ​လွဲ​မ​သွေ မြေကြီး​လက်ခတ်​မ​လွဲ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​မြတ်​စွာ​ဘုရား​ကို ဖူးမြော်​ရ​ပြီး နိဗ္ဗာန်​ကို​ရ​မယ်။ အဲ​ဒါ​က ဂေါတမ​မြတ်​စွာ​ဘုရား​ကိုယ်တိုင်​ပြော​ပြ​ခဲ့​တဲ့ ကုသိုလ်​တွေ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​မြတ်​စွာ​ဘုရားလောင်း​ပြော​ပြ​ခဲ့​တဲ့ ကုသိုလ်​တွေ​ကတော့….. မဟာ​ဝေ​သ​န္တ​ရာဇာ​တ်​တော်​ကို နေ့ချင်း​ကုန်​အောင်​နာ​ကြား​ကြ​သော​သူ​တို့​သည် ကျွန်ုပ်​ဘုရား​မ​ဖြစ်​မီ​အကြား သံသရာ​၌ ကျင်လည်​လေ​သ​မျှ​မှာ​လည်း စိတ်​နှင့်​ကိုယ်​ကို အစိုးရ​၍ လူကောင်း နတ်​ကောင်း စည်းစိမ်​ကောင်း​ကို ခံစား​ရ​ပြီး ကျွန်ုပ်​ဘုရား​ဖြစ်​သော​အခါ ရှေးဦးစွာ ဖူး​တွေ့​ရ​၍ ပ​ဋိ​သ​မ္ဘိ​ဒါ​ပညာ​လေး​ပါး​နှင့်​တ​ကွ ရဟန္တာ​အဖြစ်​ကို မချွတ်မလွဲ​ရ​နိုင်​ပါ​လိမ့်​မယ်​လို့ ရှင်​မာ​လဲ​မထေရ်​မြတ်​အား အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ​မြတ်​စွာ​ဘုရားလောင်း​က ပြော​ပြ​တော်​မူ​ခဲ့​ပါ​တယ်။
လူ​နတ်​ဗြဟ္မာ​သတ္တဝါ​အပေါင်း နှလုံး​စိတ်​ဝမ်း​အေးချမ်း​ပြီး ရောဂါ​ခပ်သိမ်း​ကင်း​ဝေး​နိုင်​ကြ​ပါ​စေ...
** ကိုကိုဇော် ( BE-EC )
# ကိုဝင်းဘလော့မှ ဓမ္မအလှူကို ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ဘလော့ရဲ့ ရှေ့ဆုံးမှာ အမြဲထားပါမယ်။ ပို့စ်ကို ပထမဆုံးရေးသားသော်သူနှင့် ကျွန်တော်ရယူခဲ့သော ကိုဝင်းကမ္ဘာကျော် ဘလော့ကို အမြဲ အထူးကျေးဇူးတင်နေပါ့မည်။
Preparind to delete... သို႔မဟုတ္ Preparing to Recyling ျပႆနာကိုဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ? By CHAN LAY (MCM)
11:52 PM PC Softwares2comments
ကြ်န္ေတာ္အခုေျပာျပေပးမယ့္ နည္းလမ္းေလးကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကိုင္ေဆာင္ထားေသာ.... ကိုကို၊မမ တို႔အတြက္....
ေဆာင္ထားသင့္ျပီး အရမ္းကိုအစဥ္ေျပတဲနည္းလမ္းေကာင္းေလးကို ေျပာျပေဝမွ်သြားမွာပါ...ခင္ဗ်ာ...။
ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းစဥ္ေပးထားတဲ့အတိုင္း ဒီျပႆနာေလးကို ကြ်န္ေတာ္စေတြ႔ခဲ့တာကို ေျဖရွင္းနည္း နည္းလမ္း မေျပာေသးခင္ အရင္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္...။
အရင္တစ္ပတ္က ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ Youtube Channel မွာတင္ထားခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေလးကို... Mozilla Firefox နဲ႕ ျပန္ေဒါင္းလုပ္ခ်လိုက္ပါတယ္...။
Download လည္းခ်ျပီးေရာ... Temp ဖုိင္ထဲကေန .mp4 Format Songs ေလးကို ျပန္ျပီး (Ctrl + X) ႏွိပ္ျပီးကြန္ပ်ဴတာကေန ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ Favorite List ထဲကို ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ပါတယ္...။
ဘယ္လိုမ်ိဳးစခဲ့တာလည္းဆိုေတာ့ (Recycling to delete...) သို႔မဟုတ္ (Recyling to moving) ဆိုျပီးအဲ့ေနရာကေန စျပီး ဖ်က္လို႔လည္းမရ၊ ကူးရင္လည္း 12MB ေလာက္ေလးကို မျပီးႏိုင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ...။
ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ D: // ထဲမွာထည့္ထားတဲ့ Personal Folder ေလးကိုသြားၾကည့္ဖို႔ဖြင့္ျပန္ေတာ့လည္း... နာရီဝက္နီးပါးၾကာျပီးမွ ဝင္လို႔ရတယ္...။
ျပီးေတာ့ Mozilla Firefox ကေနကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ Blog ေလးထဲဝင္ျပီး... Template ေလးကို ျပန္ျပီး Modified လုပ္ျပန္ေတာ့လည္း.... Script Error တက္လာျပန္ေရာဗ်ာ...
ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ျပန္ျပန္ခ်ျပီး မွ သို႔မဟုတ္ Logoff လုပ္ျပီးမွ ျပန္သံုးရတယ္။
Window Expllorer ကျပႆနာတက္ေနတာေၾကာင့္
Regirstry ထဲကိုဝင္ျပီး ျပင္ၾကည့္မယ္ဆိုေတာ့လည္း... ေထြေထြထူးထူးမေတြ႔မိျပန္ဘူးဗ်ာ...။
အခုေျပာတဲ့ျပႆနာေတြအျပင္... တစ္ျခား Probleem ေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္တာကိုမေျပာႏိုင္ေတာ့ဘူးေနာ္... အမ်ားၾကီးပဲ...။
ဒီေနရာမွာ... မိတ္ေဆြတို႔အရင္ဆံုးေတြးမိမွာက... Antivirus ေၾကာင့္ေပါ့...
Antivirus ေၾကာင့္လိုလဲေျပာႏိုင္သလို အဓိကေျပာရရင္ Registry Error နဲ႕ File Extension Associate ေၾကာင့္သာျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္...။
Computer ကို ျပန္ျပီး... New Window လုပ္ရင္လည္း မရဘူးေနာ္... ျပီးေတာ့ Data Restore လုပ္ရင္လည္း အခ်ိန္ပဲကုန္သြားမယ္... မၾကိဳးစားပါနဲ႔...
အေပၚကေျပာျပခဲ့တဲ့ Error ေတြကို တစ္ေန႔ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္...။
ကြ်န္ေတာ္ ဒီျပႆနာေလးကို ေျဖရွင္းႏိုင္သြားခဲ့တဲ့ အေျဖကို Microsoft ရဲ႕ Answer & Question List ထဲကေနရရွိလာခဲ့တာပါ...။
Youtube မွာသြားတက္ျပီးမရွာနဲ႔ မေရရာမေသခ်ာတာေတြနဲ႕ပဲေတြ႔ၾကလိမ့္မယ္...
ဒီျပႆနာေတြအျပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပႆနာေပါင္းစံုကို One Click ေလးတစ္ခ်က္တည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ Software ေလးကို ေရးသားေပးခဲ့တဲ့...
LionSea Company Limitted က Microsoft ရဲ႕ Partner လည္းျဖစ္တဲ့ Developer ၾကီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္...ခင္ဗ်ာ....
သူက အခုSoftware ကို Licence Version နဲ႕ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္...။
အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကေနျပီးေတာ့လည္း... အသင့္ရရွိထားတဲ့ Sin ဖိုင္နဲ႕ Setup ဖိုင္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ နည္းပညာညီအကို ေမာင္ႏွမေတြအတြက္...
Software ရဲ႕အသံုးျပဳပံုကိုေတာ့မေျပာျပေပးေတာ့ဘူးေနာ္... Simple to Innovation (ရိုးရိုးေလးနဲ႔ဆန္းတာမို႔) လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္မွာပါဗ်ာ...။
ကဲဗ်ာ... ေအာက္က Download Link မွာသာဝင္ေရာက္ျပီး... Download ဆြဲထားလိုက္ၾကပါ...။
Mb လည္းနဲဲနဲေလးမို႔လို႔ Facebook နဲ႕ Viber သံုးမွာထက္စာရင္... အကုန္က်ခံေပးလိုက္ပါေနာ္...။
Setup ကို ဒီမွာ Download ခ်ေပးပါ။
( :DOWNLOAD: ) 4.46 MB
Serial Key ဒီမွာ Download ခ်ေပးပါ။
( :DOWNLOAD: ) 1.93 MB
ေနာက္ထပ္ New Key ကို ဒီမွာ Download ခ်ေပးပါ။
( :DOWNLOAD: ) 29.2 KB
ယခုပိုစ့္အားတစ္ဆင့္ျပန္လည္ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ကြ်န္ေတာ့္ကို Credit ေပးဖိုးေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္...။ :)
12:14 AM Training Lessons3comments
အေကာင္းဆံုးေသာ Logo Designer ေလးပါ။ CHAN LAY (MCMM)
12:44 AM Design No comments
ယခု ကြ်န္ေတာ္ တင္ေပးထားတဲ့ Software ေလးကေတာ့... ကြ်န္ေတာ္တို႔လို IT နည္းပညာဆည္းပူးျဖန္႔ေဝေနတ့ဲ
လူငယ္မ်ား သာမက Business Men မ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သူမ်ားအတြက္...
အလြယ္တကူ အခ်ိန္သိပ္ေပးစရာမလိုပဲ ကိုယ္ပိုင္အေတြးေတြနဲ႔ အသင့္ေပါင္းစပ္ျပီၤး စိတ္ကူးပံုေဖာ္ေရးဆြဲေပးႏိုင္တဲ့ Logo
လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ Photoshop အသံုးမျပဳခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ လြယ္လြယ္ပဲ... ဒီ Logo Creator ေလးကိုပဲ အားကိုးျပီး...
ဒီ Software ေလးက Microsoft Office နဲ႕ Layot Background ပိုင္းခ်င္းတူတာေၾကာင့္မို႔ အျမင္ပိုင္းလဲ သိပ္ျပီးမခက္ခဲပါဘူး
ကြ်န္ေတာ္ ညႊန္းေနတာ တကယ့္ကို အသံုးဝင္ႏိုင္မယ့္ Software ေကာင္းေလးမို႔ပါခင္ဗ်ာ...။
သူက မည္သည့္ OS မ်ိဳးေပၚတြင္မဆို Run ေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ အရမ္းအစဥ္ေျပလွပါတယ္ဗ်ာ...။
Full Version ေပးထားပါတယ္ေနာ္....။ MB လည္းသိပ္မရွိတာမို႕ မိမိရဲ႕ Pcloud Link ကေလးထဲမွာ Save
ွSoftware ကိုေအာက္တြင္ Download ခ်ယူႏိုင္ပါျပီ...။
Full Version ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ?
လြယ္ပါတယ္...။ Software ကို သမာရိုးက် လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း Install လုပ္ေပးလိုက္ပါ။
ျပီးရင္ Software ကို မဖြင့္ေသးပါနဲ႔အုန္းေနာ္...။
ေနာက္ထပ္ ေဒါင္းလုပ္ရယူထားတဲ့ ဖိုင္ထဲက Logo Designer.exe ေလးကိုု Copy ကူးျပီး...။
C:\_Program Files\_Logo Designer ထဲကို Paste and Replace လုပ္ေပးလိုက္ပါခင္ဗ်ာ....။
ျပီးရင္ Software ကို Double Click ဖြင့္ျပီး...။ သံုးႏိုင္ပါျပီ...။
Downlaod Setup File ( DOWNLOAD HERE ) -Pcloud Link (21.7 MB)
Downlaod Crack File ( DOWNLOAD HERE ) -Pcloud Link (1.22 MB)
File Password is " chanmyaemaung.blogspot.com "
2:11 AM PC Softwares 1 comment
Full Version ပါ။
ဘလော့ဂ်မှာ ရှိရှိသမျှပို့စ်အားလုံး စုစည်းမှု
အင်ဂျင်နီယာ လက်စွဲစာအုပ်များ(English Version)
အေအပေါင်းဆိုင်ရာများ ( Hardware )
ပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာများ(Computer and Webs)
ဝင်းဒိုး အသုံးပြုနည်းများ ( Windows OS )
Linux and Ubuntu OS အသုံးချခြင်းဆိုင်ရာများ
စက်ရုပ်ကို အသုံးချခြင်းများ ( Android OS )
ပန်းသီးအသုံးပြုမှု ( Apple OS )
ကွန်ပျုတာ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများနှင့် အသုံးပြုမှုနည်းများ
ဘလော့ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာများ ( Blogger )
ဖိုင်မျှဝေရေးဆိုဒ် အသုံးပြုမှုနည်းများ ( Hosting Site Usages )
English Skills (Ebooks)
ICT Ebooks (Myanmar)
ဘလော့ဂ်မှ အဓိက ရေးသားချက်များ
Windows XP and7ကို လေ့လာခြင်း
ရန်ကုန် PLC သင်တန်းက ပို့ချချက်များ ပြန်ရေးခြင်း
ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကို အီးလ်မေးက ဖတ်မယ်။
Facebook က ဖတ်ချင်ပါက Like လုပ်ပါ။
Android APK Softwares (135)
Android Root ၊ Myanmar Fonts ၊ Tools (88)
Anti-Virus Anti-Malware and Anti-Spyware (5)
CD/DVD Burning Softwares (4)
Compressed File Softwares (2)
Cracking Softwares (5)
Engineering Softwares (4)
File Conventer Softwares (5)
File Recovery Softwares (1)
Internet Softwares (18)
Office Softwares (8)
Operating Systems DVD/CD (5)
Photo Editing Softwares (5)
Programming Softwares (2)
Sound Editing Softwares (2)
System Softwares (25)
USB Software (2)
Video Editing Softwares (3)
ကျွန်တော့်ဆီ အီးမေးလ် ပို့ချင်ရင်
အင်တာနက်မှာ ငွေရှာနည်း ( How to Make Money from Online )
ကဲ့ ကျွန်တော်လည်း အင်တာနက်မှာ ပိုက်ဆံရှာသော လောကထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပါပြီခင်ဗျား။ ဒီအကြောင်းက အသစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူ...
Huawei Y325-T00 အတွက် Myanmar Font နဲ့ System Font Restore
Soe San Mobile Service Team က Develop လုပ်တာဖြစ်ပြီး ဒီ Script ကိုရေးသားသူကတော့ Ye Lin Aung ဖြစ်ပါတယ်.. Huawei Y325-...
Viber For PC Version 4.0.2.30 and မြန်မာစာ ဖြေရှင်းချက်
ကဲ့ဗျာ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် အခုလော်လော်ဆယ် အသုံးပြုနေတဲ့ Viber PC Portable Version 4.0.2.30 လေးကို မျှလိုက်ပါတယ်။ Por...
Y320 Network Error ဖြေရှင်းနည်း
Huawei Y320 မှာ 3G သာပေါ်ပြီး 1X မပေါ်သောဖုန်းကို 73 CDMA ကဒ်နဲ့ Setting ထဲက Mobile network>>CDMA network>>man...
Firefox မှာ ZawGyi Font and Myanmar Unicode Font နှစ်ခုလုံးမြင်ရဖို့
ကျွန်တော်​တို့ မြန်မာ​များ အသုံး​များ​သော Zawgyi Unicode Font နဲ့ Myanmar Unicode Font ဖြင့်​ရေးသား​ထား​သော ဝက်​ဆိုဒ်​...
Copyright © HTAR WAIE THAR